"The! iwe unoti, 'Handina kutendeuka zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Handitendi zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini ndiri zvakare kukodzera.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini havagoni kuziva,'Anodaro mumwe, 'Kuti ndine chimwe kururama.' Hazvina zvikuru kodzero kutaura kuti hamuna chero kururama; asi zviri zvikuru kuipa kutsvaka chero. Zviri, 'Tarirai kwandiri.' Mwari achava kwaunoenda ziso rako kure iwe uye kutarira kwaari. "
Kururama haisi zvatinoda kuti vauye Kristu; zviri zvatinofanira kuwana kana tinosvika Kristu. Pamuchinjikwa, Jesu akatora murango kuti isu vakakodzerwa upenyu vanotadza isu Ndararama. Uye kana tikaisa kutenda kwedu maari, tinogamuchira mubayiro wakakwana Jesu akararama upenyu. Hakuzati zvinoshamisa?
Ichokwadi kuti hatizi vakarurama zvakakwana, asi kururama tinofanira unowanikwa maari. Aihwa, hatigoni kuzviregerera, asi kukanganwirwa tinofanira unowanikwa maari. Hatigoni chete kutanga hwedu pamusoro, asi upenyu hutsva tinoda unowanikwa maari. Zvose tinoda inowanikwa Kristu! Saka chii muri kumirira? Tarira kwaari ikozvino.
David • Gunyana 12, 2013 pa 3:51 pm • pindura
Izvi Zvechokwadi kundikomborera kunyange pakufamba kunze kutenda kwangu. Hazvigoni kuyeuchidzwa kuti zvakakwana. Kuramba Ushumiri Trip!
VictorWayneHallJr • Gunyana 12, 2013 pa 5:13 pm • pindura
Izvi vasingagoni kuva kwechokwadi. Jesu akafa kuitira akarasika aigona kuwanikwa. Kwete kuti vakawana kuva akakwana. Hakuna asi iye!
chikomborero • Gunyana 12, 2013 pa 6:51 pm • pindura
Saka zvechokwadi!! Ichi chinhu Ndaifanira kunzwa!! Gotta kutarisa Mwari! Thanks Trip Lee
Regin • Gunyana 12, 2013 pa 7:16 pm • pindura
Kwakadaro zvinokurudzira shoko. Wazviita. Ini chaizvo aida ichi. Kuramba basa guru Trip!
Taurai: Morning Mashup 9/13 | Theology Zvinhu
Rupert_lange • Gunyana 13, 2013 pa 7:23 ndiri • pindura
Ini ndisingagoni kubvumirana zvakawanda. Iri idambudziko vanhu vane pavanotanga kuziva Kristu, asi ndinokuudzai kuti akakwana muenzaniso nokuda ichi: Paul. Mumwe murume akanga achiita chimwe yakaipisisa zvinhu panyika ino, uye kukava mumwe wevadzidzi mukurusa nokusingaperi. Izvi zvinofanira kuratidza imi sei simba raMwari, uye kuti haufaniri kuva akakwana kuti ave Chrsitian.
Watchdog • Gunyana 13, 2013 pa 4:50 pm • pindura
Ndiri kufara ndawanikwa asi ndaimbova akarasika asi zvino ndawanikwa Mwari ropafadzai nepfambi chirayiro changu nyeredzi uye ramba strenghening nepfambi uye muUri tsvimbo paUri dg uye navose vari kukonzera kuti kukura Evhangeri hip icho ndiri mumwe rudo U
Kassy • Gunyana 13, 2013 pa 7:07 pm • pindura
Am yose nzira kuZambia,Africa dzenyu dzepaIndaneti chaizvo vandishumire Ndinotenda Mwari kuti basa rakanaka Iye kuita kuburikidza iwe. Kwechinguva ichi chaiva kwandiri kusvikira ndainzwisisa kuti kunyange chivi changu zvose uye brokeness Mwari achiri akaona ndive mwana wake uye aigona achiri kundida…
AHL • Gunyana 15, 2013 pa 5:16 pm • pindura
Nekuti wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu, uyo akanga asina chivi, kuti isu tive kururama kwaMwari maari. 2 VaK 5:21
Ndinotenda kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari, uye kuti iye akava munhu kuitira kuti agone kugamuchira zvedu, chirwere, zvirwere, kuchema, utera uye marwadzo nokutenda. Sezvo mweya waMwari, aisagona zvatakawana chituko ichi pamusoro pachake nokuti akanga asina chivi. Mwari akadurura hasha dzake pamusoro pake wakati kumurasha ari pamuchinjikwa. Akatora zvose uye akafa uye akaenda kugehena kwatiri! Ndiwo rudo rwaMwari! Akaripira chikwereti chedu! Uye nokutenda kwake, akamutswa! saka, nekuti Akandirwira kubva pakutukwa, nokuti Mwari wakada ini, Ndinoparidza kuti NDINI kururama kwaMwari! No dhiyabhorosi muhero achazombondida kuvhiringidza uye vanondiudza kuti handisi havagutsikani. Hapana nzira! Mwari AKADA NYIKA kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege KUPARARA, asi vane HUSINGAPERI!
Elias • Gunyana 19, 2013 pa 8:00 ndiri • pindura
Ndinorumbidza Ishe website iyi .Its saka kurira padzidziso,nyasha,rudo uye kutaura. Rambai Braggin Jesu .. Ndaifarira shoko renyu kuna 1 Johane Mugovera mangwanani panguva UAC13 .. Chengeta yakasimba pfuma mukoma kuuya
O Akanaka bhuku Life achazunungusa mukoma wangu upenyu .. chengeta writting, Ishe zvechokwadi akashandisa Mug muupenyu hwangu . Kana nokusingaperi kutarira kuchechi chirimwa mundiudze
ndinoda kubatsira chero nzira zvandinokwanisa .
lerato • Gunyana 30, 2013 pa 6:24 ndiri • pindura
Wow ichi chikuru. ave kurova pachangu nokuda wokwaEfremu vasingazvishumiri zvakakwana kana zvakanaka. kutarisa kwaari ikozvino. mumhanyi mukuru murume.